အမေ့သား: ကျွန်တော်နဲ့ တရုတ်နှစ်ကူး
ဘာ ....... တရုတ်နှစ်ကူးကို ဆယ်ရက်တောင်ပိတ်မယ်၊
ဟုတ်ရဲ့လား ...... သေချာလ်ို့ လားကွာ
မယုံတဝက်နဲ့ လာပြောပြသော သူငယ်ချင်းကို မဖြစ်နိုင်တာကွာလို့ ပြန်ပြောလိုက်သည်။
ကျွန်တော် ဒီကုမဏ္ဍီရောက်ကတည်းက တနှစ်မှမပိတ်ခဲ့ သလို
အမြဲတမ်း အရံလူအဖြစ်နေခဲ့ရတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါ။
ဒီတခါထူးထူးခြာခြား (၁၀)ရက်တောင့်ဆိုတော့ မဖြစ်နိုင်လောက်ပေ။
နောက်နေ့ မနက် အလုပ်က leader က email လာပြသည်။သေချာပါသည်၊
(၈)ရက်နေ့ ကစလို့(၁၇)ရက်နေ့ အထိပိတ်သည်တဲ့ ၊
ပိုဒေါသဖြစ်တာက ခွင့်(၄)ရက်ဖြတ်ခြင်းပင်။ မဆိုင်လိုက်တာမှ လုံးဝမဆိုင်၊
ဘာဆိုင်လည်း ကန်ပနီ ပိတ်တာပဲ ပိတ်ပေါ့ (၁)လပိတ်လည်းဂရုမစိုက်ပေ၊
မဖြတ်နဲ့ မပေးနဲ့တရားမျှတသည်။ အခုတော့ သူတို့ ဖာသာသူတို့ ပိတ်ပြီး
ကိုယ့်ခွင့်ထဲကအဖြတ်ခံရမည်ဆိုတော့ ဟိုဟာ ကြမ်းညပ်တာထက်နာသည်။
မန်နေဂျာကို သွားတက်ပြောဖို့ email စာရွက်ယူအပေါ်ထပ်တက်လာခဲ့ သည်။
ဒေါသတွေက ထိန်းမရတော့ တံခါးကို အုန်းကနဲ့ တွန်းဖွင့်ဝင်ပြီး မန်နေဂျာကို
စေ့စေ့ကြည့်ရင်း ရင်ထဲအောင်းထားသောစကားလုံးများ တရစပ်ပြောလိုက်သည်။
မန်နေဂျာလည်းအံ့သြသွားသည၊် တခါမှကိုယ်ဒီလို မပြောဖူး မဆက်ဆံခဲ့ ဖူးတော့
သူအတော်နားလည်ခက်သွားသောပုံစံဖြစ် ကိုယ့်ကိုကြည့်နေစဉ်တံခါးကို တွန်းဖွင့်ပြီး
အောက်ထပ်ပြန်ဆင်းလာခဲ့ သည်။ ဒေါသကတော်တော်နဲ့ ထိန်းမရ၊ဘာလုပ်မလဲ
(၁၀)ရက်ကြီးတောင် မြန်မာပြည်ပြန်တာကလွဲလို့ ရက်ရှည်ရှည် စလုံးမှာ
တခါမှမနားဖူး၊ အံကိုကြိတ်ပြီး တောက်တချက်ပြင်းပြင်းခေါက်လိုက်မိသည်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဇနီးသည်နဲ့တိုင်ပင်ရပြီ၊
ဘာလုပ်မလဲ? ဘယ်သွားမလဲ?ဘယ်လိုအချိန်တွေကို ဖြုန်းမလဲ?
စနေ. နဂါးအမျိုးများဖြစ်တဲ့ အစ်မတယောက်က သူ့ အိမ်ကို
လာရောက်စားသောက်ဖို့ ဖိတ်သည် ရက် က (၉-၂-၂၀၁၃)
သိပ်မကြာလိုက် အဖေစီက ဖုန်းဝင်လာသည်၊
အရင်ကန်ပနီက မန်နေဂျာ မြန်မာအစ်ကို ကြီးအိမ်က နှစ်ကူး
ဝါးတီးတဲ့ (၁၀-၂-၂၀၁၃) အူစိုပြီးပေါ့......
ဟောဗျာ ရွာက သူကြီးမင်း စလုံးရောက်နေတယ်တဲ့....
ဖိုးစိန်တို့ အိမ်မှာ တည်းမယ်တဲ့ တရက်တော့ ရွာသားတွေနဲ့ ဆုံချင်တယ်ပြောလာလေပြီ
ကိုရင်ငါးကြော်၊ ကိုရင်ဘ၊ ကိုရင်ဒီဘီတို နဲ့လည်း တွေ့ ချင်သည်ဟု သူကြီးမင်း မိန့်သည်တဲ့ ။
အားရဝမ်းသာမေးရသည်၊ဘယ်နေ့ လည်း လို့ ? (၁၁-၂-၂၀၁၃) တဲ့ထီပေါက်သလိုပျော်သွားသည်။
ဒီနေ့မနက် အလုပ်ကို နောက်ကျမှရောက်သွားသည်၊
ကမြင်းမ မိုးကြောင့် အလုပ်နောက်ကျတာ (၂)ရက်တောင်ရှိလေသည်၊
ရောက်ရောက်ခြင်းစောက်နဲ့ ထွင်းဆိုသလို မန်နေဂျာကလာပါအုံးတဲ့ ........
အပေါ်ထပ်ကို တက်သွားတော့ လာ...... ထိုင် .....မင်းကိုပြောစရာရှိလို့ 
အိုကေ....ပြောပေါ့ ကန်ပနီမှာ တရုတ်တွေများတာ မင်းသိတယ်နော်တဲ့ ...
အေးလေ.....သိတာပေါ့ သူတို့ကြောင့်ပဲ အလုပ်နားရတာလေ၊ အခုသူတို့ နှစ်ကူးမို့ ပြန်တဲ့ သူတွေများတယ်။
အလုပ်က နည်းနည်း အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်ပေါ်လာလို့အဲ့တာ မင်း ဆင်းပေးလို့ ရမလားတဲ့
(၁၃/၁၄/၁၅) တဲ့ဘာ.........ဆိုတဲ့ အသံက အခန်းသေးလေးထဲ အတော်ဟိန်းသွားသည်။
ပထမကတော့ တကန်ပနီလုံးပိတ်တယ၊်ကန်ပနီပိတ်တာမို့ ခွင့်ကမယူမနေရသဘောမျိုးနဲ့ ဖြတ်တာ
ဒေါသတွေ လိမ့်တက်လာရပြန်ပြီ ၊ အခုဆီထမင်း ၊အခုမုန့် ဆီကြော် အမျိုးမျိုးလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်တာကို
ငြိမ်ခံနေရင်တော့ငယ်နိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လေ၊ ဒီတော့ မျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့် လက်သီးကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ပြီး
တခွန်းထဲပြောခဲ့ သည်။ပြီးတော့ အခန်းထဲက ပြန်ထွက်လာသည်။ အာရုံထဲတွင် ဘာမှမရှိ.........
(၉-၂-၂၀၁၃) စနေသမီးရဲ့ စားသောက်ပွဲရယ်
ရွာကသူကြီးမင်းနဲ့ တွေ့ မဲ့ (၁၁-၂-၂၀၁၃)ရယ်သာ စိတ်ထဲမှတ်ပြီး ပြုံးပြုံးကြီးပြန်ဆင်းလာခဲ့ သည်။
သြော်.....မေ့လို့ အမေ့သား မန်နေဂျာကို ဒေါသတကြီးပြောခဲ့တာတွေကို သိချင်မှာပေါ့နော်
ပြောပြမယ်....ပထမတခါတုန်းက.ဒေါသတွေတအားထွက်ပြီး ပြောခဲ့တယ် ဆရာရယ်
(၁၀)ရက်လုံးတော့မပိတ်ပါနဲ့ (၃-၄)ရက်တော့ ဖွင့်ပေးပါ၊ခွင့်တွေလည်းမရှိတော့လို့ပါလို့
ဒုတိယအကြိမ်ကြတော့.....ဆရာရယ် (၈း၀၀၀)ကနေ(၅း၃၀)ထိပဲလား အချိန်ပိုလေးရောမပါဖူးလားလို့
အမေ့သား (၁၃၊၁၄၊၁၅) အလုပ်ဆင်းရမယ်ဗျို့ 
Posted by အမေ့သား at Thursday, February 07, 2013
Ko Boyz February 7, 2013 at 1:07 AM
ဒေါသတစ်ကြီးနဲ့ ဘာပြောလိုက်မလဲလို့ ရင်တစ်ထိတ်ထိတ် လိုက်ဖတ်နေတာ...။
Thandar Lwin February 7, 2013 at 8:44 AM
သက်ဝေ February 7, 2013 at 9:29 AM
ပြောပလိုက်တယ်... Yesssss... တဲ့... :D :D :D
ဟယ် ၀မ်းနည်းစရာ.. အလုပ်ဆင်းရမယ်တဲ့.....( အမှန်တော့ ပျော်နေတာ အမေ့သား မသိရှာဘူး)
အမေ့သားက အလုပ်မှာတော်တော်ပျော်တယ်။ အိမ်မှာမပျော်ဘူးထင်တယ်
TZA February 7, 2013 at 11:15 AM